प्रेम बानिया भन्छन्–’यस्तै वेला हो देशनिमित्त बोल्नुपर्ने’
गत शनिबार भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । यसबारे सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताएको छ ।
‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुईमित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनैतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ’ सरकारद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यतिबेला देश तथा विदेशमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न अभियान चलिरहेका छन् । आफ्नो देशको सिमानाको रक्षार्थ सबैले आवाज उठाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । यसै विषयलाई लिएर अमेरिकामा रहेका पत्रकार प्रेम बानियाँले पनि यहि बेला देशको निम्ति बोल्नुपर्ने बेला रहेको बताएका छन् ।
नेपालमा रहँदा ‘जय स्वाभिमान’ नामक चर्चित कार्यक्रम चलाएर चर्चामा आएका पत्रकार बानियाँले धेरैधेरै वर्षदेखि र पुस्तौंपुस्तादेखि हाम्रो राष्ट्रको पहिचान र शरीरमाथि भारतले तरबार नचाइरहेको र हामी नेपाली त्यसैको त्यसैको भयमा व्यस्त रहेको बताएका छन् ।
‘हामीअघिका दर्जनौं पुस्ता वुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्दाभन्दै बितेर गयो, कति–कति पुस्ता कालापानी र महाकालीको नाममा बितेर गयो,’ उनले सामाजिक संजालमा यस्तै बेला देश निमित्त बोल्नुपर्ने बताउँदै भनेका छन्, ‘झण्डै एउटा सिंगो पुस्ता सुस्ता जोगाउनु पर्छ भन्दा भन्दै बितेर गयो र अब यो निश्चित छ कि अबका बाँकी केही पुस्ताका लागि लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता विषयहरु तयार छन् । अनि हामी कसरी कहिले समृद्ध हुने, कैले अघि बढ्ने ?’
‘यस्तै वेला हो देशनिमित्त बोल्नुपर्ने तर यस्तै विषयमा बोल्दाबोल्दै हो हाम्रानिमित्त समृद्धि प्रलयको विषय भएको !!!
नेपाल र नेपालीलाई वर्षौंवर्षदेखि छिमेकी भारतले यस्तै ‘कन्टेन्ट’ हरु दिइरहेको छ र हामीलाई व्यस्त बनाइदिइरहेको छ । कैले वुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर भ्रम फैलाइदिन्छ र हामी त्यसको प्रतिवाद गर्दै व्यस्त हुनुपर्छ, यतिसम्म कि पुस्तौंपुस्तादेखि यही विषयमा जुधिरहनुपरेको छ । कैले ‘कन्टेन्ट’ का रुपमा सुस्ता दिन्छ र व्यस्त बनाइदिन्छ, कैले पूर्वी नेपालका जंगेपिल्लरहरु ढालिदिन्छ, कैले चाँदनीदोधारा, कैले मध्यतराईका पिल्लरहरुसँग जुध्न बाध्य बनाइदिन्छ ! वेलावेला कालापानीको घाउमा नून हालिदिन्छ ! र, पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा मेरो देशको एउटा चोक्टा नै निल्न खोजेको छ !
यसरी धेरैधेरै वर्षदेखि र पुस्तौंपुस्तादेखि हाम्रो राष्ट्रको पहिचान र शरीरमाथि ऊ तरबार नचाइरहेछ र हामी त्यसैको भयमा व्यस्त छौं । हामीअघिका दर्जनौं पुस्ता वुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्दाभन्दै बितेर गयो, कति–कति पुस्ता कालापानी र महाकालीको नाममा बितेर गयो । झण्डै एउटा सिंगो पुस्ता सुस्ता जोगाउनु पर्छ भन्दा भन्दै बितेर गयो र अब यो निश्चित छ कि अबका बाँकी केही पुस्ताका लागि लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता विषयहरु तयार छन् । अनि हामी कसरी कहिले समृद्ध हुने, कैले अघि बढ्ने ?
मैले आफ्नो पत्रकारिताकालमा सवभन्दा बढि रिपोर्टिग गरेको कुनै विषय छ भने यही सिमाविवाद हो । झण्डै–झण्डै मेरो पुस्ता पनि यसै विषयमा विवाद गर्दागर्दै बितेर जानेछ । अनि कैले कसरी सोच्ने देशसमृद्धि परिवर्तनका विषयहरु ? आखिर दुई सरकार मिलेर किन यो विषयलाई सदाका लागि समाप्त पार्न सकिरहेका छैनन् वा चाहिरहेका छैनन् ? यसले धेरै पुस्ताको नष्ट गर्नसक्छ कृपया गम्भीर बनौं ।
पुर्खाले खेदाए साम्राज्यवाद, विस्तारवादको अब पालो’